Famandrihana biby fiompy biby fiompy, famonosana biby fiompy amin'ny alikaola, famonosana henjana biby fiompy, famonosana biby fiompy, petra maitso
Description:Famandrihana biby,Famatorana biby fiompy,Fametahana akora henjana matevina,Fametahana biby maitso,,
 HomeProductsStrappingPet Strapping
Pet Strapping (Total 18 Products)
Ny vokatra avy amin'ny Pet Strapping , mpanofana manokana avy any Shina, Famandrihana biby , Famatorana biby fiompy mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fametahana akora henjana matevina R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
19mm Green PET mitambatra ho an'ny fonosana entana Fametahana plastika amin'ny plastika amin'ny alàlan'ny biby fiompy amin'ny alàlan'ny famenon-tsolika vita amin'ny alikaola . Toetra mampiavaka indrindra amin'ny fomba...
Fikaovan'ny PET ho an'ny indostrian'ny fonosana Bundle Ity fametahana PET ity dia natao ho an'ny jiro ho an'ny asa fanaovan-jiro, Palletising sy mifehy. Izy io dia afaka manohana isan-karazany sakany, matevina, ary polymer...
Ny tanjaky ny tanjaky ny kirihitra PET mafy Ny fametahana plastika vita amin'ny plastika amin'ny biby fiompy Pet dia miforitra amin'ny tanjaky ny fifamatorana tsy miovaova ary avo be ny elongation. Toetra mampiavaka indrindra amin'ny...
Fehin-kibo fehikibo tsara famatsiana biby fiompy Ny fametahana biby fiompy amin'ny alàlan'ny fihenam-bolo (polyester) amin'ny haingam-pandeha ambony kokoa noho ny polyester (PET) dia ny 20% -30% strapping.Manampy izany, ny fametahana ny...
Pallet fehikibo fonosana fehikibo Ny tariby fatoran'ny biby fiompy dia maivana, mora famindrana, ampitahaina amin'ny fehikibo vy, tsy ilaina ny manapaka ny biby fiompy fombafomba amin'ny alàlan'ny fandrosoana. Izy io izao no...
Pallet fehikibo fonosana fehikibo Ny tariby PET PET dia maivana, mora afindrana, ampitahaina amin'ny fehikibo vy, tsy ilaina ny manapaka ny biby fiompy mamontsina amin'ny alàlan'ny fandrosoana. Izy io izao no fanta-daza...
Sina mahery vaika, lanja maivana, mametaka ny maitso Green Ny fametahana biby fiompy amin'ny alàlan'ny fihenam-bolo (polyester) amin'ny haingam-pandeha ambony kokoa noho ny polyester (PET) dia ny 20% -30% strapping.Manampy izany, ny...
mafy fonosana plastika maintso mpiandry biby Ity fametahana PET ity dia natao ho an'ny jiro ho an'ny asa fanaovan-jiro, Palletising sy mifehy. Izy io dia afaka manohana isan-karazany sakany, matevina, ary polymer variations. azo antoka azo...
16 mm ny biby fiompy maintso an-tsokosoko 16 mm ny savaivony 8 mm ny savaivony petra kofehy maintso dia ny habenay matetika, miaraka amin'ny hery misintona mahery, dia afaka ampiasaina hanangona entana 500 kg. Satria ny fifandimbiasan'ny vy,...
Fehikibo fehikibo biby maintso Ny fikaovan'ny biby fiompy maitso no tena notadiavin'ny fonosana fonosana vaovao eran-tany. Ny fehin-tsoavaly miverina dia maka ny toeran'ny fatorana vy sy ny fonosana vita amin'ny vy-vy, dia mora kokoa...
Fametaka boaty plastika amin'ny alàlan'ny fonosana Ny famatorana plastika amin'ny biby fiompy biby dia vita amin'ny kitapo hanamboarana sakafo, fanoherana ny hamandoana, ny harafesina, ny rano, ny refy. Ny fantsom-baravarankely...
Pet poloney plallet fehikibo fehikibo Ny akora vita amin'ny biby fiompy poly strapping rol l dia miaro ny tontolo iainana [Polythene Terephthalate [akora na kojakoja- biby. Manome elanelam-bolo, hatevina, halavany, lanja ho an'ny safidinao,...
Petra milina vita amin'ny plastika tarika vita tànana Ny taratasy fanakorontanana vita amin'ny plastika amin'ny biby fiompy dia nampiasaina tamin'ny famonosana entana mavesatra, be mpitia indrindra amin'ny indostrian'ny...
Pet pallet fonosana fehikibo fehikibo tariby Famehezana vita amin'ny plastika amin'ny biby fiompy biby dia efa be dia be ny fanamboarana kitay, ny fonosana taratasy, ny fikosoham-bary, ny fibreana simika, ny fonosana vita amin'ny landy,...
Vidiny mora vidy vita amin'ny fonosana biby fiompy Pet andilany tamy azo ampiasaina ho toy ny safidy ny famaritana izany, na ny fehin-kibo vy-tariby ihany vy amin'ny hery fihenjanana. Fa ny lanjan'ny 1/6 amin'ireto fitaovana fonosana...
Pallet fehikibo fonosana fehikibo Maivana ny fehikibo miora, mora azo afindra, mampitaha amin'ny fehikibo vy, tsy ilaina ny manapaka ny PET tongotra aloha. Izy io izao no fanta-daza fantsom-pifandraisana malaza sy fantsom-baravarankely...
Fametahana tarika plastika plastika vita amin'ny plastika Fametahana tariby plastika vita amin'ny plastika amin'ny alikaola dia afaka ampiasaina ho toy ny safidy ny fehikibo vy fehikibo iray na ny tariby-vy miaraka amin'ny tanjaka...
Plastika vy mametaka tarika fantsona tarika Plastika vy mametaka ny tarika petra fantsona vita amin'ny PET, manana vidiny kely, tahiry, fiarovana ny tontolo iainana, maharitra, endri-pandrihana avo dia avo, fanatsarana biby fiompy hanatsarana ny...
Shina Pet Strapping mpamatsy
Ny fametahana PET dia izao no fantsom-panafody malaza indrindra sy tariby fanakorontanana, satria fitaovana vaovao, ny andriamby biby dia manana vidiny mora, mavesatra avo loatra, manatsara ny fahombiazan'ny famoronana fahombiazana. Fametahana vy vita amin'ny plastika izay ampiasaina amin'ny fonosana hazo, fanamboarana vy, fonosana fitaratra, famonosana metaly sns. Ny fantsakan'ny vy vy dia moistureproof, tsy fahita rano, fanoherana ny harafesina. Ny halavan'ny tarika petra mofomamy dia 0.6 ka hatramin'ny 1.5mm, ny halavany 12 ka hatramin'ny 25mm, ny hery mahery vaika dia 200 ka hatramin'ny 1200kg. Afaka manamboatra famandrihana vy vita amin'ny vy vita.
Famandrihana biby Famatorana biby fiompy Fametahana akora henjana matevina Fametahana biby maitso Famandrihana vy